အုပ်စုခွဲကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ zip ဖိုင် - DataNumen
တစ် ဦး အုပ်စုခွဲပြန်လည်ပြုပြင်ရန် zip ဖိုင် (ဖိုင်အမည်ကို 'mysplit' လို့ယူဆပါ။zip') ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ပါ
1. ဒေါင်းလုပ် DataNumen File Splitter နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ပါ။
3. “ Join” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
4. “ Join” ပေးတဲ့ dialog မှာ split in files အားလုံးကိုရွေးပြီး source file list ထဲထည့်ပါ။
5. စာရင်းထဲတွင်ပါ ၀ င်သောအစိတ်အပိုင်းများ၏အစီအစဉ်သည်မူလအစီအစဉ်နှင့်တူညီကြောင်းသေချာပါစေ။ mysplit.z01 သည်ပထမတစ်ခုဖြစ်ပြီး mysplit.z1 သည်ဒုတိယဖြစ်သည်၊ mysplit ။zip နောက်ဆုံးတစ်ခုပါ
လိုအပ်လျှင်“ Up Up” နှင့်“ Move Down” ခလုတ်ကိုသုံးပါ။ အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုလွဲချော်လျှင်သို့မဟုတ်အဂတိလိုက်စားလျှင်၎င်းကိုသင်လျစ်လျူရှုနိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့၏အမိန့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အပိုင်း ၂ ကိုလွဲချော်ပါကစာရင်းပါအစိတ်အပိုင်းများကို mysplit.z2, mysplit.z01, …, mysplit ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။zip.
6. mysplit_merged ကဲ့သို့သောဖိုင်ဖိုင်အမည်ကိုသတ်မှတ်ပါ။zip
7. “ S ကိုနှိပ်ပါtarmysplit_merged တည်နေရာဖိုင်သို့အစိတ်အပိုင်းများကိုချိတ်ဆက်ရန် t ပူးပေါင်းပါဝင်ပါ။zip.
8. Join လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားလျှင်၊ သင်လုပ်နိုင်သည်tart DataNumen Zip Repair နှင့် mysplit_merged ကိုပြုပြင်ပါ။zip ပုံမှန်အဖြစ် zip ဖိုင်။ ပုံသေသတ်မှတ်ထားသောဖိုင်တွင်အုပ်စု၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ဒေတာများပါလိမ့်မည် Zip ဖိုင်။ သင်ကလူကြိုက်များနှင့်အတူကဖွင့်နိုင်ပါတယ် Zip ထိုကဲ့သို့သောဝင်းအဖြစ် utilities,Zipဝင်းRAR, etc
ပူးပေါင်း, zip ဖိုင်